विम्बल्डन: इतिहास, वर्णन, परम्परा
खेल र फिटनेस, टेनिस
टेनिस - सबैभन्दा भव्य खेल को एक। यो, हदसम्म विम्बल्डन कारण इतिहासको 130 वर्ष छ र यो दिन आफ्नो परम्परा संरक्षण। उहाँले चार सबैभन्दा प्रतिष्ठित ग्रैंड स्ल्याम च्याम्पियनशिप मध्ये एक छ, आयोजित सबै इङ्गल्याण्ड टेनिस र क्रोके क्लब।
यो सबै दक्षिण-पश्चिम लन्डन (ठाउँ Worple रोड) मा क्लब इलाका, 22 मानिसहरूले उपस्थित थियो टेनिस पहिलो प्रतियोगिता, आयोजित गर्दा 1877 को जुलाई मा सुरु भयो। यस प्रतियोगिताको मात्र एकल पुरुषहरु को लागि भएको थियो। विजेता को प्रतियोगिताहरु को केवल एक भुक्तानी 35 guineas को पुरस्कार प्राप्त भएको थियो। खेलाडीहरूलाई4दिनमा competed, र अन्तिम खेल आयोजकहरु केही आय दिनुभयो जो 200 दर्शक, आकर्षित। पहिलो च्याम्पियन, टूर्नामेंट को इतिहास मा आफ्नो नाम प्रविष्ट, एक स्थानीय पसलेलाई स्पेन्सर गोर थियो।
1884 देखि, अदालत मा त्यहाँ पहिलो विदेशी सहभागीहरू थिए र प्रतियोगिता कार्यक्रम महिला र डबल्स द्वारा complemented छ। पहिलो विजेता Maud वटसन र Renshaw दाजुभाइ, थिए केही वर्ष नेतृत्व गरे। 1913 मा, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ को वार्षिक प्रतियोगिताको विश्व च्याम्पियनशिप को स्थिति दिइएको थियो टर्फ मा (तीन थिए)। प्रतियोगिताहरु साँच्चै ठूलो अमरीकी बन्ने, केवल पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा अवरोध गरेका थिए।
1922 देखि प्रतियोगिताको परिवर्तन भएको छ स्थान, तर लन्डन क्षेत्रमा रहेका - 13 500 मान्छे मा केन्द्र कोर्ट बनाइएको थियो जहाँ चर्च रोड,। दर्शकहरूले विभिन्न लटरी सञ्चालन लोभ्याए। पहिलो टिभी प्रसारण भएको थियो जब प्रतियोगिता मा ब्याज, 1937 मा वृद्धि भएको छ। यस समाजवादी देशहरूको प्रतिनिधिहरु 50 वर्ष मा च्याम्पियनशिप सहभागी सामेल भएका छन्। 1967 देखि, पहिलो विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिताको बिस्तारै नेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरु को एक को स्थिति प्राप्त, व्यवसायीक लागि खुला थियो।
आज, टेनिस घाँस संग जटिल 19 कोर्ट को भाग रूपमा। केन्द्रीय, 1928 मा शुरू भएको 15 हजार मान्छे मा दर्शकहरु को संख्या, र कोर्ट №1, संग, प्रतियोगिताको BattleShips समयमा प्रति वर्ष प्रयोग मात्र दुई हप्ता। प्रतियोगिता यसको क्षेत्रमा अक्सर खेलाडीहरू हार ग्रस्त रूपमा, colloquially च्याम्पियन को कब्रिस्तान रूपमा चिनिने मुछिनुभएको छ र कोर्ट №2। 2009 मा केन्द्र कोर्ट मा, वर्षा को मामला मा एक स्लाइड चदंवा द्वारा बनाए। बिजुली प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले खेल मात्र दिन प्ले छन्।
घाँस रोल मा राखिएको छ, यो विशेष योर्कशायर उब्जाउ गरिन्छ। माटो संरचना disclosed छैन। हामी केवल लन अप राई बनेको र 14 मान्छे एक agronomist, धेरै प्रतिष्ठित छ जो एक स्थिति द्वारा लाग्यौं हेरचाह गर्न, दुई प्रजातिहरू fescue छ भनेर थाह छ। Sward उचाइ - 8 मिमी, कि यस्तो कोटिंग मा प्ले टेनिस। विम्बल्डन आफ्नो पैड सधैं एक समयमा एक बाज नाश जो कबूतर, उडान भन्ने तथ्यलाई लागि प्रसिद्ध थियो। अब दयालु तरिकामा प्रयोग।
को को संरचना
दुई हप्ता, विम्बल्डन प्रतियोगिता मात्र होइन व्यावसायिक खेलाडी पाँच अंक प्ले, तर जूनियर र वरिष्ठ, साथै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता को ठाउँ बन्दछ। सम्म 1924 अघिल्लो च्याम्पियन कल मात्र राउन्ड थिए, तर नियम पछि परिवर्तन खेलाडीहरू छरिएको र विजेता अन्य खेलाडी संग बराबर अवस्था छ जसमा राष्ट्रिय आधार, मा आकर्षित थिए। 1973 मा परिचय साथ, स्तर ATP राष्ट्रिय महासंघों सहभागी भएको टोलीको संरचना निर्धारण भएनन् छन्।
विम्बल्डन कि गति 32 खेलाडी मा अरु देखि अलग आधिकारिक स्तर निर्भर गर्दैन, तर घाँस कोर्ट मा खेलाडीहरूलाई को प्रदर्शन को परिणाम हालैका वर्षमा। बल को कम बाउन्स संग तेज टेनिस मन - परंपरागत,3विम्बल्डन प्रतियोगिताहरु को पूर्वसन्ध्या हप्ता बेला घाँस मा खेल को लागि तयार "मालिकको" श्रृंखला।
प्रतियोगिता ग्रेट ब्रिटेन को शाही परिवार को संरक्षण अन्तर्गत आयोजित, त्यसैले एक निश्चित conservatism र परम्परा को सख्त उत्सव प्रतिष्ठित छ। आयोजकहरु 1st अगस्ट सोमवार देखि काउन्टडाउन जान्छ कि मिति देखि प्रस्थान छैन।6हप्ता गणना, त्यसैले प्रतियोगिताको 2016 27 मा सुरु जुन। तिनीहरूले आधिकारिक प्रतियोगिता हो रूपमा रंगशालामा र मैदान, हरियो र रातो-नीलो सजाया छन्। खेलाडीहरूलाई प्यास्टेल रंग को आवेषण एउटा सानो प्रतिशत संग सेतो पोशाक देखा पर्न आवश्यक छ। न्यायाधीशहरूले पुरुष सहभागीहरू उल्लेख महिलाहरु, नाम द्वारा कडाई हो - उपसर्ग "मिस" वा "श्रीमती" संग।
विम्बल्डन मा परम्परागत भोजमा - क्रीम संग दस स्ट्रबेरी। यसलाई जहाँ विशेष अतिथि लागि हुर्किसकेका ब्रिटिश फारमहरु, बाट ल्याए। हटाउने वितरण देखि क्रप एक दिन भन्दा कम विस्तार। प्रतियोगिता अवधिको लागि लगभग 150 हजार प्लेट खपत।
पुरुष विजेता एक कप को रूप मा एक पुरस्कार प्राप्त सोने को पानी चढा चाँदी। महिला - एक चाँदी ट्रे। तर मुख्य कुरा हो - यो हरेक वर्ष वृद्धि गर्न tends जो मौद्रिक क्षतिपूर्ति छ। 2016 मा विम्बल्डन 5% द्वारा खडा पुरस्कार पैसा। फलस्वरूप, यो 28.1 लाख पाउण्ड (अमेरिका बारे $ 41 लाख) बराबर छ। एकल मा विजेता - Briton Endi Marrey र अमेरिकी सेरेना विलियम्स -2लाख पाउण्ड को कुल पाए। यो समानता हुनत धेरै व्यवसायीक किनभने मानिसहरू2पटक थप खेल समयमा अदालत मा खर्च, यो अन्याय विचार, 2007 गर्न काउन्टडाउन जान्छ।
1977 देखि, संग्रहालय लन्डन को उपनगर खोलिएको थियो। विम्बल्डन रोचक प्रदर्शन देखा र तीन-आयामी म्याट्रिक्स आकार Dzhona Makinroya, एक रोमाञ्चक खेल बताइरहेका। संग्रहालय घरहरू मारिया सारापोभा पोशाक - 2004 साल मा प्रतियोगिताको विजेता। सुविधा टूर्नामेंट समयमा यसको ढोका बन्द, वर्ष-राउन्ड संचालित।
Steffi Graf, Uilyam Renshou, पीट Sampras र रोजर फेडरर: टेनिस खेलाडी शीर्षक7पटक जित्यो गर्ने - संग्रामहरू जीतेको संख्या लागि रेकर्ड बीचमा। 46 वर्ष को उमेर मा - मार्टिना नवरातीलोवा यो9पटक, पछिल्लो एक गर्न सक्षम थियो।
NOVAK Djokovic - ग्रह को सबै भन्दा राम्रो टेनिस खेलाडी
Daria Kasatkina - रूसी टेनिस को एक उज्ज्वल तारा
Korolev एव्जेनी - को कजाख टेनिस भविष्य?
वेरा ज्वोनारेवा: टेनिस को एक संक्षिप्त जीवनी
टेनिस मा एक एक्का के छ: डिकोडिङ अवधि
टायर "नोकिया Nordman 5": समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों
को stabilizer struts को प्रतिस्थापन कस्तो छ
तपाईं प्रतिबद्ध कि eyebrows को हेरविचार मा 10 त्रुटिहरू
अचम्मको Beshtau - पहाड
कालिब्रेसनभएको काठ: विशेषताहरु र आवेदन को प्रयोग
कसरी नुनीन मशरूम खाना पकाउनु?
"डीडीटी": Discography, विषय गीतहरू र समूह को इतिहास
कोयला (फूल): अंकुरण, transplanting, हेरविचार
माइक्रोसफ्ट सुरक्षा अनिवार्य। समीक्षा सुरक्षा को एक उच्च स्तर ग्यारेन्टी
सफारी पार्क, Primorye। तैमूर अनौठो मित्रता र Cupid
"Sedalgin-नियो": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, मूल्य
Lacoste - Eau डे विजेता र विजेता लागि